२०२० को १० सर्वश्रेष्ठ डच ओभन्स - खाना
10 सर्वश्रेष्ठ डच ओभनहरू रोस्ट्स, स्ट्यूज, ब्रेइजहरू र बीचमा सबै कुराका लागि
कुनै पनि मौसमी कुकमा सोध्नुहोस् र उनीहरूले तपाईंलाई बताउँदछ कि डच ओभन भान्साको एउटा अपूरणीय उपकरण हो। यसले सबै भन्दा राम्रो स्टू र भाँडो पोष्ट बनाउँदछ, बर्नरबाट कुनै पनी ओभनमा ट्रान्जिसन, उचित ध्यानसँग वर्षौंसम्म रहनेछ। र तपाईंको स्टोभटपमा बसिरहेको धेरै राम्रो देखिन्छ।
तर यस भाँडोलाई विचार गर्नाले तपाईंलाई धेरै पैसा लाग्न सक्छ (र यसको मतलब हामी कहिँ पनि to $० देखि $०० सम्ममा), यो तपाईं र तपाईंको भान्छाको लागि सही खोज्न केही अनुसन्धान गर्नु राम्रो हो। तपाईंको लागि भाग्यमानी, हामीले कडा मेहनत गरेका छौं बजारमा हाल १० वटा उत्तम डच ओभन पाउन।
जे भए पनि डच ओभन के हो?
तपाईं एक डच ओभन मात्र एक सुन्दर (र धेरै धेरै भारी) सॉस प्यानको रूपमा सोच्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो पूरा कहानी छैन। प्राविधिक , एक डच ओभन एक बाक्लो पर्खालको भाडा हो जसमा कडा फिटिंग ढाकिएको छ। यो सामान्य रूपमा मौसमी वा enameled कास्ट फलामबाट बनेको हुन्छ तर कास्ट एल्युमिनियम वा सिरेमिकबाट पनि बनाउन सकिन्छ।
डच ओभनहरू कुनै न कुनै रूपमा सयौं बर्षदेखि टाढा छन्। यस अनुसार संसारमा सब भन्दा शक्तिशाली विचार , १th औं शताब्दी युरोपमा, तिनीहरू काँसाबाट बनाइएको थियो र धेरै महँगो। एकचोटि बालुवाबाट मोल्डहरू बनाउने डच विधिलाई कास्ट फलाममा (ब्रास भन्दा सस्तो सामग्री) लागू गरियो, डच ओभन जुन हामीलाई थाहा छ अमेरिकामा यो जन्म भएको थियो।
ध्यान दिएर लायक पनि छ: तिनीहरूलाई फ्रान्समा कोकोटहरू र अन्य अ -्ग्रेजी भाषी देशहरूमा क्यासरोल्स भनिन्छ। डचहरूले वास्तवमा ब्र्याडपन भन्ने चीज प्रयोग गर्छन् जुन इन्मेल्ड इस्पातले बनेको हुन्छ, उनीहरूले डच ओभन भन्दा अधिक प्रयोग गर्दछन्।
एक डच ओभन केको लागि राम्रो हो?
डच ओभनको बाक्लो पर्खाल र भारी, कडा फिटिंग ढाक्चा हेर्नका लागि मात्र होईन। तिनीहरू कम वाष्पीकरणको साथ कम, ढिलो तातो स्थानान्तरणको लागि आवश्यक छन्। यसले डच ओभनलाई टेन्डर, रसीली स्ट्यु, ब्रेज र रोस्टका लागि आदर्श बनाउँदछ। र ती अग्लो, फराकिला पक्षहरूले तातो राख्छन् र स्प्लेटरहरू समावेश गर्दछ, जसले मासु र सब्जीको सजिलो स्टोभटोप ब्राउनमा अनुवाद गर्दछ। (तपाईं यसलाई गहिरो त्राउन र रोटी पकाउन पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि यसले तातो राख्दछ र तापक्रमलाई राम्रोसँग राख्दछ।)
जबसम्म ढक्कन ह्याण्डल गर्मीमा सुरक्षित हुन्छ (वा हटाउन योग्य), एक डच ओभनले स्टोभटप-टु-ओभन व्यंजनहरूको सजिलो काम गर्दछ। र यदि भित्री सतह enameled छ, यसले एक को रूपमा डबल शुल्क गर्न सक्दछ ननस्टिक खाना पकाउने सतह।
घरमा स्नैक्स बनाउन सजिलो
किनकि डच ओभन प्राय: ठुलो ठूला हुन्छन्, तपाईंलाई लाग्ला कि तिनीहरू स्टकपॉट वा पास्ता भाँडोको लागि राम्रो विकल्प हो, तर त्यति नै छिटो होईन। त्यो बाक्लो, भारी शुल्क कास्ट फलामले गर्मीको एक टन मा पकड सक्छ, तर यो पहिलो स्थान मा तातो गर्न एक धेरै समय लाग्छ। ठूलो मात्रामा पानी वा पास्ता उमाल्नको लागि पातलो भाँडामा टाँसिनुहोस् र यसको लागि तपाईंको स्किलेट आरक्षित गर्नुहोस् द्रुत हलचल-फ्राई ।
डच ओभन छनौट गर्दा कारकहरूले विचार गर्नुपर्ने:
आकार: एक गोल डच ओभन सबैभन्दा बहुमुखी र काम गर्न सजिलो हुन्छ, किनकि यो एक स्टोभ बर्नरमा फिट हुन्छ र भाँडोको सतहमा समान रूपमा तताउँछ। अंडाकार डच ओभन फिनिकी हुन सक्दछ जब यो गर्मी वितरणको कुरा आउँछ (किनकि यो बर्नरमा राम्रोसँग फिट हुँदैन), तर यसले धेरै खाना समात्न सक्दछ। साथै, पक्षहरू जाँच गर्नुहोस्: तिनीहरू सीधा वा ढलान भएका छन्? स्लोपेड पक्षहरू मतलब ब्राउनिंगको लागि कम सतह क्षेत्र, तर यो एक ड्रेब्रेकर जरूरी छैन।
आकार: पाँच क्वार्ट डच ओभन सायद दैनिक उपयोगी पकाउनको लागि सबैभन्दा उपयोगी र बहुमुखी आकार हो, तर अन्य क्षमताहरूमा पनि यसको गुणहरू हुन्छन्। एक वा दुई धेरै रातको लागि पकाउने? सानो आकारको लागि अप्ट गर्नुहोस्, जस्तै तीन वा चार क्वाटरहरू। भीडलाई खुवाइरहनुभएको छ? ठूलो क्षमता छनौट गर्नुहोस्, सात वा आठ क्वाटर नजिक।
तौल: डच ओभन जति गह्रौं छ, यसलाई तातो राख्न र राम्रो राख्न राम्रो छ। हल्का वजन विकल्पहरू कम गुणस्तरको हुन्छन् र तातो स्पटहरू विकास गर्न सक्छ जुन तपाईंको खानालाई जलाउँदछ। एक कडा, उच्च-गुणवत्ता डच ओभन सामान्यतया १० देखि २० पाउन्ड सम्म कहीं पनि तौल हुनेछ।
रंग: होईन, हामी सीमित संस्करण मौसमी रusको बिरूद्ध नारंगी र निलोसँग मतलब गर्दैनौं। हाम्रो मतलब भित्र रंग हल्का रंगको सतहहरूले यसलाई ब्राउनिंग र कारमेलिजेशन हेर्न सजिलो बनाउँदछ (र त्यसकारण जलती हुनबाट जोगिन्छ), तर अँध्यारो सतहहरूले दाग देखाउँदैन।
सेटअप मेक ब्रशेस कसरी प्रयोग गर्ने
समाप्त: तामचीनी फिनिस धेरै ननस्टिक हुन् तर यदि तपाईं खाना पकाउने भाँडासँग आक्रामक हुनुहुन्छ भने चिप गर्न सक्नुहुनेछ। गैर enameled सतहों अधिक रखरखाव को आवश्यकता छ तर समय मा chip वा दाग छैन।
डच ओभन कसरी राख्ने:
त्यसोभए तपाईंले भर्खरै एउटा भव्य डच ओभनमा स्पिलग गर्नुभयो। अब तपाई यसलाई हेरचाह गर्न चाहानुहुन्छ त्यसैले यो तपाईको भन्दा लामो समय सम्म रहन्छ। (ठट्टा गर्दै। प्रकारको। तिनीहरू राम्रै लाटो टिकाऊ हो।)
नियम न। १: तपाईको डच ओभनलाई डिशवाशरमा कुनै पनि हालतमा नराख्नुहोस्। यदि यो enameled छ र विशेष गरी यदि यो छैन भने। समयको साथ, डिशवॉशरले तामचीनी कोटिंग लगाउँदछ र कच्चा कास्ट फलामको लागि, यसले जंग लाग्न सक्छ। डच ओभन सफा गर्ने उत्तम तरिका तातो पानी, साबुन र एक सानो कुहिनो ग्रीसको साथ हो। (जिद्दी मार्कहरू सामान्यतया हल्का घर्षण क्लीन्जरको साथ हल्का बनाउन सकिन्छ बार कीपर मित्र ।)
नियम न। २: डच ओभनसँग पकाउँदा, काठको टुक्रा वा प्लास्टिकको पक्षमा धातुको भाँडा छाँट्नु उत्तम हुन्छ ताकि चिपिंग वा तामचीनी वा तामा लगाउनबाट बच्न। र जब कि तामचीनी कांच जस्तै हो, यो गर्छ क्र्याक गर्ने सम्भाव्यता छ यदि अत्यधिक तापमान परिवर्तनको अधीनमा राखिएको छ (त्यसैले आफ्नो ओभनमा खाली डच ओभन प्रहात गर्नुहुन्न वा स्टोभटपमा अत्यधिक उच्च तातो प्रयोग नगर्नुहोस्)।
र यदि तपाईं ईन्मामेल नगरिएका डच ओभनको साथ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं कास्ट-फलामको स्किलेट जस्तो गरी व्यवहार गर्नुहोस्, नियमित रूपमा सिसमि। गरी र लामो सूडी सोक्साहरूलाई बेवास्ता गर्नुहोस्।
२०२० को १० सर्वश्रेष्ठ डच ओभनहरू, एकै नजरमा:
सर्वश्रेष्ठ समग्र डच ओभन: लज--क्वार्ट ईन्मेल्ड डच ओभन
सर्वश्रेष्ठ स्प्लर्ज डच ओभन: Le Creuset 5.5-Quart enameled गोल डच ओभन
सर्वश्रेष्ठ ओभल डच ओभन: महान जोन्स डचेस डच ओभन
सर्वश्रेष्ठ नॉनस्टिक डच ओभन: कारवे होम डच ओभन
सर्वश्रेष्ठ गैर-enameled डच ओभन: लज पूर्व-मौसमी कास्ट आइरन डबल डच ओभन
सर्वश्रेष्ठ बजेट डच ओभन: लक्ष्य थ्रेसोल्ड--क्वार्ट कास्ट आइरन राउन्ड डच ओभन
सर्वश्रेष्ठ सानो क्षमता डच ओभन: Staub 3.75-Quart आवश्यक ओभन
सर्वश्रेष्ठ लाइटवेट डच ओभन: डेनिश कोबेन्स्टाइल--क्वार्ट क्यासरोल
क्याम्पिंगका लागि सर्वश्रेष्ठ डच ओभन: लज--क्वार्ट डिप क्याम्प डच ओभन
उत्कृष्ट डच ओभन: मिलो काना द्वारा .5..5 क्वार्ट डच ओभन
सम्बन्धित: २० डच ओभन चिकन रेसिपीहरू जसले आफूलाई धेरै बनाउँछ
१. लज--क्वार्ट ईन्मेल्ड डच ओभन
सर्वश्रेष्ठ समग्र डच ओभन
यस डच ओभनले राम्रोसँग प्रदर्शन गर्दछ - itors यदि राम्रो छैन भने not प्रतिस्पर्धीहरू, मूल्य ट्यागको एक अंशमा, र त्यसैले हामी यो विचार गर्दछौं यो समग्रमा सबैभन्दा राम्रो डच ओभन हो। जबकि उपलब्ध छैन धेरै एक ले क्युउसेटको रues्गको स्पेक्ट्रम, यो रंगको सभ्य मात्रामा आउँदछ र सजिलो ब्राउनिंगको लागि समान क्रीम रंगको भित्री भाग प्रस्तुत गर्दछ। यो ओभन-सुरक्षित °०० डिग्री सेल्सियस सम्म छ, घुँडा सहित, र प्रेरण सहित सबै प्रकारका स्टोभटपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। (यो आजीवन आवाश्यक वारंटीको साथ आउँदछ र अमेजनमा लगातार स्टार्लर समीक्षाहरू हुन्छन्।) लजले दावी गरे कि यो डिशवॉशर सुरक्षित छ, यद्यपि हामी ह्यान्डवसि .मा रहनेछौं।
अमेजन मा। 89
२. ले क्राउसेट सिग्नेचर ame..5-क्वार्ट राउन्ड डच ओभन
सर्वश्रेष्ठ स्प्लर्ज डच ओभन
भाग्यवस तपाईको लागि र दुर्भाग्यवश तपाईको वालेटको लागि, धेरै चर्चा गरिएको डच ओभन वास्तवमै पैसाको मूल्य हो। जबकि फ्रेन्च ब्रान्डले आकारहरूको पूर्ण चयन प्रस्ताव गर्दछ, .5..5 क्वार्ट राउन्ड डच ओभन अबसम्म सबैभन्दा बहुमुखी छ। यो भीडलाई खुवाउनको लागि पर्याप्त छ तर ठुलो छैन कि सार्न वा भण्डार गर्न गाह्रो छ, र लज जस्तै, तापमानमा सुरक्षित हुन्छ सुरक्षित घुमाउरो सहित 500०० डिग्री सेल्सियस सम्म। अर्को ब्राण्डको साथ छनौट गर्न तपाईले धेरै र colorsहरू भेट्टाउनुहुने छैन। मूल्यलाई थप स्वादिष्ट बनाउन, यसलाई आजीवन लगानीमा विचार गर्नुहोस्।
कसरी अनुहारको कपाल प्राकृतिक रूपमा एक दिनमा हटाउने
यसलाई किन्नुहोस् ($ )$०)
Great. ग्रेट जोन्स डचेस डच ओभन
सर्वश्रेष्ठ ओभल डच ओभन
यदि तपाईंसँग भोकका मुखहरू छन् वा वास्तवमै पूरै कुखुरा भुल्न मन पर्छ भने, यो 75.7575-क्वार्ट गोलाकार डच ओभनले ती कामहरू र अधिक गर्न सक्दछ। यो आवश्यक °०० ° एफ तापमान सीमाको साथ आउँदछ र सबै प्रकारको बर्नरहरूमा कार्य गर्दछ। अद्वितीय खैरो रंगको आन्तरिकले अझै पनि तपाईंलाई ब्राउनिंगमा नजर राख्दछ तर क्रीम ईन्टिरियर जस्तो दागहरूमा समात्ने सम्भावना कम हुन्छ। बजारमा धेरै भन्दा फरक, समाप्त एक आधुनिक म्याट हो, र यो स्थायी र सीमित-संस्करण इन्स्टाग्राम मैत्री रंगहरूको चयनमा आउँदछ। ग्रेट जोन्सले पनि दावी गर्दछ कि यो एक डिशवाशर सुरक्षित छ, तर तपाइँ हाम्रो नियम सम्झनुहुन्छ। (आँखा झिम्काउनुहोस्
यसलाई किन्नुहोस् ($ १55)
C. कारावे होम डच ओभन
सर्वश्रेष्ठ नॉनस्टिक डच ओभन
पक्का, तामचीनी नन-स्टिक हो, तर यो त्यस्तो छैन चाखलाग्दो त्यहाँ बाहिर सतह। यो सिरेमिक लेपित नम्बर, अर्कोतर्फ, तेलमा अण्डा फ्राउन पर्याप्त फिसलन छ। ओ हो, र यसले परम्परागत डच ओभनको पनि सबै काम गर्न सक्छ। यसलाई डच ओभन र ननस्टिक स्किलेट बीचको एक हाइब्रिडको रूपमा सोच्नुहोस्। यसमा उच्च साइड र टाईट फिटिंग लिड छ जसले स्टू र ढिलो भुँडीको लागि तातो राख्छ, तर एल्युमिनियम कोरको मतलब यसले रेकर्ड समयमा तातो बनाउँछ। यो ove50० ° एफ र ओभन-सुरक्षित पनि छ विषाक्त कोटिंग्सबाट स्वतन्त्र Teflon जस्तै।
यसलाई किन्नुहोस् ($ १२$)
Od. लज पूर्व-मौसमी कास्ट आइरन डबल डच ओभन
सर्वश्रेष्ठ गैर-enameled डच ओभन
सत्य कुरा भनौं भने हामी हाम्रो डच ओभनमा तामचीनी फिनिस गर्न रुचाउँछौं। तर यदि तपाइँ देहातपूर्ण रूप हेर्न चाहानुहुन्छ, तपाईको डच ओभन बारम्बार उच्च तातो अनुप्रयोगहरूको लागि प्रयोग गर्नुहोस् वा दागले सताउन सक्तैन, यो गैर-एनमाल्ड विकल्प तपाईको उत्तम शर्त हो। यसमा इनामेल्ड लज डच ओभनको सबै सुविधाहरू छन्, ढक्कनको थप लाभको साथ जुन स्किलेट र एक अनुभवी सतहमा परिणत हुन्छ जुन उमेरसँगै राम्रो हुन्छ। (यो अत्यन्त सस्तो पनि हो। केवल भनिरहेको छ।)
अमेजन मा। 50
Tar. लक्ष्य थ्रेसोल्ड--क्वार्ट कास्ट आइरन राउन्ड डच ओभन
सर्वश्रेष्ठ बजेट डच ओभन
त्यसोभए तपाईंसँग लक्ष्य बजेटमा ले क्रेउसेट स्वाद छ। कुनै ठूलो कुरा हैन, किनकि लक्षित डच ओभन वास्तवमै शीर्ष खाच हो। वास्तवमा यो सम्पादकले wear बर्ष लगाएर लुगाका चिह्नहरू हेरेका थिए। -क्वार्ट साइज गह्रौं, कडा हो र चम्किलो इनामेलमा समाप्त हुन्छ जुन यो भन्दा धेरै प्रिस्सी देखिन्छ, र हल्का भित्रीले सहज कारमेल बनाउनको लागि बनाउँछ। मात्र चेतावनी? लक्ष्यले निर्दिष्ट गर्दैन कि यो मोडल ओभन-सुरक्षित छ, त्यसैले सुपर उच्च टेम्पहरूसँग काम गर्दा सावधान हुनुहोस् र ओभनमा डुबडी नछोड्नुहोस्; हामी red०० डिग्री सेल्सियस मा रोटी पकाउन प्रयोग गरिसकेपछि हाम्रो रातो एनामेलमा केहि विकृत रूप देख्दछौं।
St. Staub 75.7575- क्वार्ट आवश्यक ओभन
सर्वश्रेष्ठ सानो क्षमता डच ओभन
कहिलेकाँही तपाईले आठ भन्दा बढि बाँच्नको लागि पर्याप्त खाना बनाउनु पर्छ, र कहिलेकाँही तपाई दुई जनाको लागि खाजा बनाउन चाहानुहुन्छ। यो Staub डच ओभन हाम्रो अन्य छनौट भन्दा थोरै सानो छ - तीन वा चार साना कुखुराको फिला ब्रेसि to गर्न पर्याप्त छ - जुन सानो ठाउँ वा खानाको लागि आदर्श हो। साधारण क्रीम आन्तरिक जस्तो नभई, कालो भित्री दागले देखाउँदैन, र धातु घुम्कीले स्टोभ-टु-ओभन अनुकूल बनाउँदछ। हाम्रो मनपर्ने सुविधा, तथापि, बनावट भित्री ढक्कन हो। यो सानो टक्करहरूसँग कास्ट गरिएको छ, जसले स्टीम समात्छ र ओसिलो र रसदार अन्तिम परिणामहरूको लागि यस थालमा फिर्ता पठाउँदछ।
उत्तम व्यायाम बोसो कम गर्न
यसलाई किन्नुहोस् (7 457; $ २००)
Danish. डेनिश कोबेन्स्टाइल--क्वार्ट क्यासरोल
सर्वश्रेष्ठ लाइटवेट डच ओभन
यो ड्यान्स्क क्यासरोलले दुई शिविरहरूमा अपील गर्दछ: जसले आफ्नो क्याबिनेट भित्र र बाहिर १ 15-पाउन्डको भाँडो सार्न चाहँदैनन्, र जो मध्य शताब्दीको डिजाइनको साथ ग्रस्त छन्। हामी यो मनपराउँदछौं किनकि एन्मेल्ड इस्पात कास्ट फलाम भन्दा हल्का हुन्छ, तर परम्परागत डच ओभन जत्तिकै सफा गर्न सजिलो हुन्छ, र विशिष्ट आकारका ह्यान्डलहरू समात्न र ढुवानी गर्न सजिलो हुन्छ। निफ्टी ढक्कन एक ट्रिभेटको रूपमा डबल्स, यो र colors्गको दायरामा आउँदछ र यो तुलनात्मक रूपमा सस्तो पनि छ।
Od। लज--क्वार्ट दीप क्याम्प डच ओभन
क्याम्पिंगका लागि सर्वश्रेष्ठ डच ओभन
तपाईं एक सप्ताहन्त महान आउटडोरमा खर्च गर्न सक्नुहुन्न र एक्लै सोमर्समा बस्नुहुनेछ (हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्, हामीले प्रयास गरेका छौं)। यो डच ओभन विशेष रूपमा शिविर-शैलीको खाना पकानेको कठोरताको सामना गर्न डिजाइन गरिएको थियो, त्यसैले अगाडि बढ्नुहोस् र यसलाई सिधा आगोमा बास्नुहोस्। तिपाई स्टाइल खुट्टाहरूले यसलाई तातो कोइलामा सुरक्षित राख्छ, र ढक्क्ढा अलि मोटो हुन्छ, त्यसैले तपाईं पकाउँदा कोइला माथि शीर्ष राख्न सक्नुहुन्छ। बाक्लो ह्यान्डलले आगोबाट हटाउने सुरक्षित र सजिलो बनाउँदछ, र गैर-इनामेल्ड कास्ट फलामले आकर्षक पाटिना विकास गर्दछ जति तपाईं यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ।
अमेजन मा। 90
१०. मिलो काना द्वारा .5. - क्वार्ट डच ओभन
राम्रो डच ओभन
उनी एक दर्शक हुन् तर उनी पनि कुकर हो। (हे।) यो डच ओभन हामीले प्रेम गर्ने अरूसँग मिल्दोजुल्दो छ, तर सुनको घुंडी र लाक्ड फिनिशले भव्यताको हावा छोड्दछ जुन प्रतिरोध गर्न गाह्रो छ। ओभन 500०० डिग्री सेल्सियस सम्म सुरक्षित छ, यसले ब्रेनेज, स्ट्युज, रोटी बेकिंग र रोस्टको साथसाथै बाँकी… ह्यान्डल गर्न सक्दछ साथै प्लस गरिसकेपछि तपाईं 'ग्रामको लागि फोटो खिच्न चाहानुहुन्छ। अझ राम्रो, यो कुनै धेरै शीर्ष आकर्षक-डच ओभनको रूपमा धेरै बढी आकर्षक मूल्यमा देखिन्छ।
सम्बन्धित: ११ सर्वश्रेष्ठ रेटेड एयर फ्राइरहरूमध्ये मेरो अनुसार एक फ्रान्सेली फ्राय उत्साही
पसल किचन पिक्सहरू:
क्लासिक 8-इंच शेफको चाकू
उल्टो मेपल काट्ने बोर्ड
$ 34 अहिले खरिद गर
कास्ट आयरन राउन्ड कोकोट
$ .$० अहिले खरिद गर
आटा बोरा तौलिए
$ १। अहिले खरिद गर
स्टेनलेस स्टील फ्राई प्यान
$ १ .० अहिले खरिद गर
बच्चाहरूको लागि क्रिसमस क्यारोलहरू
कद्दू एक फल हो
रोमान्टिक तातो अंग्रेजी चलचित्रहरू
साधारण स्न्याक्स कसरी बनाउने